20% On Food Bill အသေးစိတ်
အိန္ဒိယ အစားအသောက် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ သူတွေအတွက် The Corriander Leaf Indian Fire Dining Restaurants and Ball Room မှာ Food Only 20% Discount
ထိုင်းစာ ၊ တရုတ်စာတွေ ပဲ အမြဲစားနေရတာ ငြီးငွေ့နေတယ်ဆိုရင် ပုံမှန်စားနေကျမဟုတ်တဲ့ အိန္ဒိယအစားအသောက်တွေကို စားကြည့်ရအောင်….
အစားအသောက် အမျိုးမျိုး နဲ့ အရသာတွေ စုံလင်တဲ့အပြင် ကျန်းမာရေး နဲ့ ညီညွှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အိန္ဒိယ အစားအသောက်တွေက ကမ္ဘာမှာလည်း တကယ်ကို စားသုံးသူများပြားတဲ့ အစားအသောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်….
အိန္ဒိယအစားစားတွေဟာ လတ်ဆတ် တဲ့ သစ်သီးသစ်ရွက်များ နဲ့ ပြုလုပ်တာများတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ ကျန်းမာရေး နဲ့လည်း ညီညွှတ်သလို ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်ဓာတ်များကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်…
ဒါကြောင့် အိန္ဒိယ အစားအသောက်တွေကို အခုမှ စပြီး Try ချင်တဲ့ သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ကြိုက်နှစ်သက်လို့ စားနေကျပဲဖြစ်ဖြစ် ဝါရင့် ကျွမ်းကျင် စားဖိုမှူး များကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အိန္ဒိယ အစားအသောက်ကောင်းများရှိတဲ့ The Corriander Leaf Indian Fire Dining Restaurants and Ball Room ကိုညွှန်းပေးပါရစေ …
စားသုံးသူများ အားပေးမူကြောင့်လည်း အခုဆို ဆိုင်ခွဲပါ ဖွင့်လှစ်ထားပြီးပဲဖြစ်တယ်…. The Corriander Leaf Indian Fire Dining Restaurants and Ball Room မှာလည်း B&F Clubcard နဲ့ သွားရောက်သုံးဆောင်မယ့် သူတွေအတွက် အစားအသောက် Menu တွေအတွက် 20% Off ပရိုမိုးရှင်း ရှိပါတယ် ….
The Corriander Leaf Indian Fine-Dining Restaurants and Ball Room
Blog 12, Ahlone Road, Yangon International Hotel Compound, Ahlone
Ph – 099 69684512
The Corriander Leaf India Fine -Dining Restaurants
Unit 53,Wing©, Blog A-5,Star City, Thanlwin
Ph - 09 969684513
20% ပရိုမိုးရှင်း ရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ငွေမရှင်းမီ B&F Clubcard ကို ပြသပေးရုံပါပဲ ….ပရိုမိုးရှင်း အကြောင်းအရာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် 09 895711240 , 09 895711235 ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ….
Promotions Period - 17.March.2020 to 17.Sep.2020